Abafazi Swimwear, Bikini Swimwear, Abafana Swwingar - Stamgon
Ukufika kwabaNtsha abantwana Swimsuit iqhekeza elinye lamantombazana ...
☆ Uyilo oluncinci olungeminye lweekhola lokukhuselwa okusebenzayo kwelanga kunye noyilo lwekliphu kwi-zipper ukukhusela ulusu lwabantwana. ☆ Uyilo lwe-zip yangaphambili kulula ukuyibeka kwaye uyikhuphe, kwaye lunokusetyenziswa ngokulula emanzini. ☆ Ilaphu lithandekile kwaye lithambile, kwaye akukho lula ukutyhoboza ulusu. Igama lemveliso: Ukufika kwabaNtsha abantwana Swimsuit isiqwenga esinye samantombazana isixhobo sabantwana Izinto: 82% Polyamide, 18% Uhlobo lweMveliso yeSpandex: I-Swimwear ene-OEMM yobungakanani beNkonzo: S / M / L / XL Linning: 100% p ...
Ukufika kwesiko elitsha intle isiqwenga sabantwana ...
☆ Uyilo oluncinci lwe-collar emele ukukhusela ilanga elisebenzayo kunye noyilo lwe-clip in the zipper ukukhusela ulusu lomntwana. ☆ Uyilo lwe-zip yangaphambili kulula ukuyibeka kwaye uyikhuphe, kwaye lunokusetyenziswa ngokulula emanzini. ☆ Ilaphu lithandekile kwaye lithambile, kwaye akukho lula ukutyhoboza ulusu. Igama lemveliso: Ukufika okutsha kusiko elilungileyo Isixhobo sabantwana sabhukuba samakhwenkwe Izinto ezisetyenziswayo: 82% Polyamide, 18% Uhlobo lweMveliso yeSpandex: I-Swimwear ene-OEMM yeNkonzo ka-ODM: S / M / L / XL Linning: 100% ...
☆ Uyilo oluncinci lwe-collar emele ukukhusela ilanga elisebenzayo kunye noyilo lwe-clip in the zipper ukukhusela ulusu lomntwana. ☆ Uyilo lwe-zip yangaphambili kulula ukuyibeka kwaye uyikhuphe, kwaye lunokusetyenziswa ngokulula emanzini. ☆ Ilaphu lithandekile kwaye lithambile, kwaye akukho lula ukutyhoboza ulusu. Igama lemveliso: Ukufika okutsha kusiko elitsha Isiqwenga sabantwana isixhobo seMpahla: 82% Polyamide, 18% Uhlobo lweMveliso yeSpandex: I-Swimwear ene-OEMM yeNkonzo ye-ODM: S / M / L / XL Linning: 100% ...
☆ Ukubeka okuphezulu okwinqeni yokulawula ukuhamba kwe-bikini iseti, umtya wegxa ohlengahlengiswayo .; Iphethini eyahlukileyo eyahlukileyo, ukuprintwa kweenyosi, ukuprintwa kwenyoka, ukuprintwa kweqwarhashe lesilwanyana kunye nokushicilelwa kweentyatyambo; I-Thong kunye ne-swey ezantsi, ukugubungela okuncinci, fihla isicubu sakho kwaye ubonise umzimba wakho omtsalane; Igama lemveliso: Ulusu lwenyoka olupheleleyo lwenyoka eprintwe ngabafazi abashushu i-bikini isixhobo seMpahla: iSpandex / Uhlobo lweMveliso yohlobo lweBikini-Swimwear ngobukhulu benkonzo ye-OEMM: S / M / L / XL Linning: Isici sePolyester: Sexy, Imfashoni, iBreathab ...
Isinxibo esitsha se-Bohemia se-suti yokuqubha i-african ...
I-SXY CROCHET BIKINI SET. Le ndawo yokuntywila esitywiniweyo enemisonto emnandi yenye yeendlela onokuthi ubalasele elunxwemeni. I-HALTER DESIGN NGOKUGQIBELA. I-Halter bikini, tyhala i-padding yokuphucula, iphethini ehle kakhulu. Ungawugcina ubume bomzimba wakho buhle nge-crochet bikini. . Ungayonwabela eyona nto ifanelekileyo ngomtya omde kungakhathaliseki ukuba umzimba wakho unjani. ☆ IINGXELO ezininzi. Iseti ye-crochet bikini ilungele ukuqubha, ulwandle, ukugeza kwelanga, phuma ...
☆ Umgangatho ogqwesileyo: Iindlela ezi-4 zoku wolula i-elastic, egqunywe ngelaphu eline-mesh ethambileyo, ekhululekile, kwaye inokuphefumla, uqinisekisa ukuba uyakuyonwabela ngokupheleleyo ukuyinxiba. Qaphela: ubungakanani obuqhelekileyo: S, M, L, XL, XXL. ☆ I-zipper ephambili yangaphambi, efanelekileyo kwaye ikhuselekile ukuyisebenzisa. ☆ Le bhulukhwe yolwandle ikubeka uvakalelo olukhethekileyo malunga nentuthuzelo kunye novuyo kwiiholide, i-honeymoon, uhambo lwaselwandle, ipati yephathi kunye nemisebenzi eyahlukeneyo yamanzi. Igama lemveliso: Iibhasikithi ezincinci ezikhawulezayo zomileyo zokumila zaselunxwemeni, iindlela ezi-4 zokuwolula i-camo board shorts, mens bea ...
☆ Isinqe esidityanisiweyo kunye nentambo ye-elastic kunye ne-cored cored kunye ne-eyelet zensimbi. ☆ Umgangatho oqaqambileyo: Isixhobo somgangatho siyi-100% ye-polyester peach ulusu velvet, sikhululekile, kwaye sinokuphefumla, qinisekisa ukuba uyakuyonwabela ngokupheleleyo ukuyinxiba. Qaphela: ubungakanani obuqhelekileyo: S, M, L, XL, XXL. ☆ Iipokotho ezimbini zangaphambili kunye neploti enkulu esecaleni, efanelekileyo ukubeka izinto ezingakumbi ngaphakathi. ☆ Le bhulukhwe yolwandle ikubeka uvakalelo olukhethekileyo malunga nentuthuzelo kunye novuyo kwiiholide, i-honeymoon, uhambo lwaselwandle, ipati yephathi kunye nemisebenzi eyahlukeneyo yamanzi. ...
i-bikini, isiqwenga esinye sokubhukuda
itanki, impahla yokunxiba elwandle kunye nokugubungela i-top
iimens swimwear, iifutshane zebhodi
I-yoga ye-Yoga, impahla yezemidlalo ephezulu
ihempe yokusebenzela engasebenziyo, ihempe ezisebenzayo
Ibhulukwe le-Yoga, i-yoga leggings, iifutshane ze-yoga
Masithathe uphuhliso lwethu lube kwinqanaba eliphezulu
IQuanzhou Stamgon Trading Co Ltd.
IQuanzhou Stamgon Trading Co Ltd ibisenza ishishini ngealaphu ukususela ngo1993. Iimveliso zethu zibandakanya iifutshane zaselwandle, iimpahla zokunxiba kunye ne-Yoga yokunxiba etc. Iimarike zethu eziphambili zikumazwe ase-Yuropu, North America, South Pacific kunye ne-Southeast Asia. Sineefektri ezisixhenxe zokudibaniselana ezinabasebenzi abangaphezu kwe-2300 abanobuchule. Iziphumo zethu zemveliso zifikelela kwizigidi ezingamashumi amabini eedola zaseMelika ngonyaka.
Jonga ngaphezulu >>
Siya kwandisa kwaye someleze ubuhlakani esinabo.